Kanaal Channelkii Ugu Dambeeyay | RayHaber | raillynews
[11 / 01 / 2020] Taariikhda Wadada Tareenka ee Bursa Mudanya	16 Bursa
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulChannelkii ugu dambeeyay ee Istanbul
12 / 11 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Headline, TURKEY
channel istanbul guzergahi
Wadada ugu Dambeysa ee Kanal Laststanbul: Mashruuca Kanal İstanbul wuxuu ka bilaaban doonaa Yeniköy wuxuuna raacayaa Sazlıdere Dam wuxuuna kula kulmi doonaa Marmara dhanka Küçükçekmece Lake. Channel Istanbul, halkaas oo wararka xanta ee ku saabsan wadada ay ku baahinayeen luuqad ilaa luuqad muddo bilo ah, ayaa la tixgeliyey markii la go'aaminayo wadada saxda ah ee wadada.
Sida ku xusan warkan wargayska Sabah Nazif KAraman, Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalayntu waxay diyaarisay Qorshe-weyneedka loogu talagay mashruuca jihadaan. Wasaaraddu waxay sidoo kale u dirtay qorshaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul iyo xarumaha kale ee dawladda ee la xiriira baaritaanka horudhaca ah.
Qorshahan ayaa waxaa dib u eegaya waaxda hormarinta magaalooyinka ee IMM. Degmadu waxay u soo sheegi doontaa Wasaaradda natiijada baaritaanka. Marka ay Wasaaraddu diyaariso oo ay saxeexdo qorshaha kama dambaysta ah, ra'yi ayaa laga heli doonaa degmooyinka kale iyo hay'adaha dawliga ah. Kadib, qorshaha, IMM iyo degmooyinka degmada waa la joojinayaa.
Taariikhda mashruuca biyo-mareenka kale ee loo maro Bosphorus wuxuu dib ugu laabanayaa Boqortooyadii Rooma. Xiriirka ka dhexeeya gudoomiyaha Bitinya Plinius iyo Emperor Trajan, Mashruuca Gaadiidka Wabiga Sakarya ayaa la sheegay markii ugu horeysay.
Fikradda ah isku xidhka Badda Madoow iyo Marmara xayiraad macmal ah ayaa ah 16. 6 jeer illaa qarnigii 21aad. Bartamihii-1500 sano, mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee 3 oo ay qorsheeyeen Boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa ahayd isku xirka Webiga Sakarya iyo harada Sapanca ee Badda Madow iyo Badda Marmara. 1550 wuxuu yimid ajendaha inta lagu gudajiray boqornimadii Suleymaan Buux. Naqshadeeyayaasha Sinan iyo Nicola Parisi, oo ah labada naqshadeeye ee waaweyn ee waqtiga, waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan mashruucan in kasta oo dagaalladu socdaan.
Macluumaadka Farsamada ee Kanal İstanbul
Waxaa laga fulin doonaa dhinaca Yurub ee magaalada. Wadad biyo macmal ah ayaa la furi doonaa inta u dhaxeysa Badda Madow iyo Badda Marmara si loo yareeyo maraakiibta maraakiibta isku xirta Bosphorus, oo hadda ah marin kale oo u dhexeeya Badda Madow iyo Badda Mediterranean-ka. Halka barta ay ku kulmayso Badda Marmara, mid ka mid ah labada magaalo ee cusub ee la saadaalinayo in la dhisi doono 2023 la dhisi doono. Kanaalkaan, Bosphorus ayaa gebi ahaanba loo xiri doonaa taraafikada booyadaha iyo laba jasiiradood oo cusub iyo jasiirad cusub ayaa laga abuuri doonaa magaalada Istanbul.
Dhererka 40 - 45 km
Ballaca (dusha): 145 - 150 m
Ballac (saldhig): 125 m
Qoto dheer: 25 m
453 waxaa loo qorsheeyay in lagu dhiso milyan mitir oo laba jibbaaran. Meelaha kale waxay u qaybsan yihiin garoomo diyaarado leh 30 milyan oo mitir murabac, Ispartakule iyo Bahçeşehir oo leh mitir mitir laba jibaaran 78, wadooyin leh 33 milyan oo mitir murabac, sagxadyo leh 108 milyan mitir oo laba jibaaran iyo 167 milyan mitir murabac ah ayaa loo qaybiyaa meelaha cagaaran ee caanka ah. Dhulka la soo saaray waxaa loo adeegsan doonaa dhismaha garoonka diyaaradaha iyo dekada weyn, waxaana loo adeegsan doonaa in lagu buuxiyo qodista iyo miinooyinka. Kharashaadka mashruucu wuxuu ka badan karaa $ 10 bilyan.
15 Janaayo Wadada mashruucan ayaa lagu dhawaaqay 2018. Wasaaradda Gaadiidka ayaa dadweynaha u shaacisay in mashruucu uu ka gudbi doono wadada Küçükçekmece Lake, Sazlısu Dam iyo Terkos Dam.
Biyo-xireennada iyo Harooyinka La Isticmaalo
Sida qorshuhu yahay, bilowga Channel-ka Istanbul wuxuu ku xiggayaa garoonka diyaaradaha Istanbul. Sababta ugu muhiimsan ee ay Wasaaraddu u dooraneyso wadadan ayaa ah in dhulka ugu badan ee ku yaal xarkaha kanaalka uu iska leeyahay khasnadda iyo in Sazlıdere Dam iyo Küçükçekmece Lake loo isticmaali doono heerka ugu sarreeya markii kanaalada la furay.
Hawlaha qodista waxaa lagu fulin doonaa aagga kilomitir 16 oo ka baxsan wabiga Sazlıdere Dam iyo Küçükçekmece Lake. Wadada laamiga ah ee mashruuca waalan ee Istanbul ayaa noqon doonta Yeniköy-Sazlıdere Dam-Arnavutköy-Başakşehir-Küçükçekmece Lake. Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta ayaa weydiistey degmooyinka iyo hay'adaha la xiriira kaabayaasha iyo mashaariicda qaab dhismeedka loogu talagalay qorshayaasha sanadka soo socda, mashaariicda iyo howlaha mashruuca Kanal Istanbul ee bisha Abriil. Iyadoo la waafajinayo fikradaha la gaarey Wasaaradda, ayaa la sameeyay qorshe horumarineed oo miisaaman oo loo yaqaan '50 / 100'. Qorshahan waxaa diyaariyey Agaasinka Guud ee Qorsheynta Joogtada ee hoos timaada Wasaaradda.
Channel Istanbul - Deriska illaa Garoonka Diyaaradaha Istanbul
Qorshaha, dejinta cusub, aagagga ganacsiga, xarumaha dalxiiska iyo meelaha keydka ah ee laga dhisi doono wadada Kanal Istanbul wadada ayaa la go'aamiyay. Sida ku xusan qorshaha loo yaqaan 'Zoning Plan', kanaalka wuxuu ka bilaaban doonaa Yeniköy ee waqooyiga, 3. Gegada dayuuraduhu waxay noqon doonaan kuwa ku xiga. Dhererka 44 km iyo bedka mitirka 200 ayaa la qorsheynayaa in laga dhiso waqooyiga iyo dhamaadka koonfur kanaalka wuxuu noqon doonaa marin qaali ah. Sababta ugu muhiimsan ee ay Wasaaraddu u dooraneyso wadadan ayaa ah in dhulka ugu badan ee ku yaal xadka kanaalada ay iska leeyihiin khasnadda. Sida ku xusan xogta lagu diyaariyey qorshaha, dhulka intiisa badan ee ay mareyso waxaa loo adeegsadaa dhanka beeraha. Mashruucu wuxuu kaloo qorsheeyay inuu ka helo faa iidada ugu badan Sazlıdere Dam iyo K Lakekçekmece Lake. Sazlıdere Dam wuxuu ku jiri doonaa kanaalka.
Harada Kucukcekmece Lake, oo loo diray digniin halis ah wasaqda darteed, ayaa sidoo kale ka dhici doonta kanaalka. Sidan, kharashyada deynta iyo kharashaadka kale ayaa hoos u dhici doona. Faa'iidada kale ee wadada ayaa ah inaysan jirin dhul kaymo ah wadada. Xeebta agteeda waxaa jiri doona guryo cufan iyo cufnaan yar, aag ganacsi iyo xarumo dalxiis.
Waxaa loo qorsheeyay in ay badal u noqoto Bosphorus, aagga mashruucu wuxuu ku yaalaa xuduudaha degmooyinka Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir iyo Arnavutköy. Dhamaan kaabayaasha iyo qaab dhismeedka khuraafaad ee laga dhex sameyn doono baaxadda mashruucu waxay ku sii jiri doonaan xuduudaha degmooyinkaas.
Marka loo eego warbixinta la dhammaystiray, dhererka jidka Kanal Istanbul 45 kiiloomitir. Kanaalka wuxuu mari doonaa Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir iyo Arnavutköy. Wadada ayaa ka bilaabaneysa isgoyska u kala goosha Badda Marmara iyo harada Küçükçekmece wuxuuna kusii socon doonaa wadada loo yaqaan Sazlıdere Dam Basin. Markaad ka gudubto tuulada Sazlıbosna si ay u gaadho bariga Dursunköy kadibna u gudubto tuulada Baklalı waxay gaari doontaa Badda Madoow dhanka galbeed ee Lake Terkos. 7 km Küçükçekmece, 3 kun 100 mitir Avcılar, 6 kun 500 mitir Başakşehir haray oo ujira 29 kiiloomitir wuxuu ahaan doonaa xuduudaha Arnavutköy.
Khadka Channel ee Istanbul
Wadarta qiimaha mashruucan ayaa la filayaa inuu noqdo bilyan 20. Iyadoo la tixgalinayo maalgashiga sida buundooyinka iyo garoomada diyaaradaha, 100 bilyan doolar Waa lagu qiyaasey.
Mashruuca 5 in la dhamaystiro sanadka
Ku dhawaad ​​5 kun oo shaqaale ayaa shaqeyn doona inta lagu gudajiro marxaladda dhismaha. Markuu mashruucu dhamaado waxay shaqooyin siin doontaa kun qof. 1,350 waxay ku habboonaan doontaa in laga gudbo xitaa maraakiibta DTW. Iyada oo ku xidhan qoto dheer kanaalka, ku dhawaad ​​1,5 bilyan oo mitir cubic oo qoditaan ayaa la filayaa. Waxaa lagu qiyaasaa in 115 milyan oo mitir cubic oo shey ah ay ka soo bixi doonaan badda iyo hoos udhaca.
3 Island ayaa la dhisi doonaa
Sida ku xusan bayaannada ku jira warbixinta EIA, kooxda koowaad waxay ka koobnaan doontaa qeybaha 3 guud ahaanna aaggu wuxuu noqon doonaa hektar 186. Kooxda labaad ee jasiiraduhu waxay ka koobnaan doonaan jasiiradaha 4 isla markaana guud ahaan aaggu wuxuu noqon doonaa hektar 155. Kooxda saddexaad waxay ka kooban tahay jasiirado 3 waxayna dabooli doontaa dhul hektar ah oo loo yaqaan '104'. Qodista waxaa loo isticmaali doonaa bannaanka jasiiradda dhexdeeda, iyadoo lagu buuxinayo xeebta Badda Madoow iyo dhismaha xeebta cusub ee loo gudbi doono gobolka Lake Terkos.
Buundada 6 ee Ka Gudubta Canal Istanbul
Wadooyinka buundooyinka sidoo kale waa la sameeyay. Marka laga reebo buundooyinka, tuubooyinka gurmadka degdegga ah ayaa lagu dhisi doonaa kanaalka. Si loo hubiyo socodka maraakiibta, taraafikada aaminka ah iyo jawaabta deg-degga ah haddii ay dhacdo shil ama jab, 6 waxaa loo dhisi doonaa unugyada wareega ee '8' oo lagu soo dhawaado hal kiiloo kiiloo mitirba. Dhererka jeebbooyinkani waxay noqon doonaan ugu yaraan mitir 750. Intaa waxaa sii dheer, xarumaha waxqabadka degdegga ah ee loogu talagalay hawlgalka kanaalka, soo gelitaanka iyo dhismaha kaabayaasha, kaabayaasha iyo dhismayaasha waaweyn sida nidaamyada taraafikada maraakiibta, biyo-mareennada, nalalka iyo meelaha sugitaanka ee Badda Madoow iyo Marmara Sea ayaa la sameyn doonaa.
23 km2 Sii-haynta si loo sameeyo
Meelaha ugu saameynta badan ayaa ah areahintepesi oo ay ku nool yihiin 35 kun oo qof iyo Altınşehir oo ay ku nool yihiin 14 kun oo qof.
Mid ka mid ah mowduucyada ugu badan ee looga hadlay Kanal Istanbul ayaa ahaa meelaha la wareegida lagu leeyahay. Sida warbixinta lagu sheegay, wadada xNUMX kilomitir waxay dhex mareysaa harada Küçükçekmece, 45 waxay soo martay Sazlıdere. Hal kiiloomitir waa kaymaha. Meelaha aagga dambe dib ayaa loo wareejin doonaa isla markaana aaggan qiyaastii waa kiiloo mitir laba jibaaran oo ah 8. Meelaha ugu dadka badan ayaa u dhexeeya khadka Küçük lineekmece Avcılar iyo Baklalı Terkos. Meelaha ugu badan ee mashruucu saameeyey waxaa ka mid ah "teahintepesi" oo ay ku nool yihiin 12 kun oo qof iyo Altınşehir oo ay ku nool yihiin 23 kun oo qof.
Ku saabsan mashruuca Kanal Istanbul
Iyadoo la fulinayo mashruuca "Kanal Istanbul" ee la qorsheeyay gudaha xuduudaha Istanbul, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir iyo Arnavutköy; yaraynta haday adag Bosporus ah, ka hortagga shilalka waxaa laga yaabaa in ay dhacaan ka dib markii shil badda suurto gal ah iyo navigation ah si Bosporus, nolosha, bixinta badeecada iyo ammaanka deegaanka dalalka oo dhan in ay isticmaalaan Straits Turkish ah iyo sidoo kale Turkey waa muhiimad weyn. Mashruuca qorshaysan wuxuu ujeedkiisu yahay yareynta taraafikada markabka oo qatar ku ah nolosha iyo hantida dhaqan ee Bosphorus iyo inuu si kale u helo marinnada maraakiibta culus ee ka soo gala labada albaabba.
Xaaladdan oo kale la joogo, waxbarashada injineernimada faahfaahsan socda Kucukcekmece Lake qiyaastii 45 kilomitir dheer - Sazlıdere Dam - Terkos East soo socda si waddada shaqada dhismaha in la dhameystiro ku jira sanadkii 5 sanadka 100 xaaladda dayactirka loo baahan yahay Istanbul halkan ka ayaa la filayaa in ay u adeegaan Turkey.
Warbixinta Qiimaynta Saamaynta Deegaanka ee Kanal Istanbul
Dhamaan Warbixinta Qiimaynta Saamaynta Deegaanka ee Canal Istanbul HALKAN jari karo. (Faylku waa 141 MB)
Isbeddelka wadada ee khadadka Bursa Bus (Cusub…
Isbeddelka Channel Istanbul ee Wadada…
Waddada Channel Istanbul way dhammaatay
Arslan, Waxyaabo Kale oo Badal looga dhigo Kanal Istanbul Ars
Waddada ayaa ka dhigaysa mid cad oo laga helo Kanal Istanbul
Wadada ugu dambeeya ee tareenka ee Izmir
Xaaladda ugu dambeysay ee Mashruuca Raadinta Jidka Trabzon…
Wareegga oo sugaya wadiiqada khaaska ah ee Istanbul
Qiimaha Dhulka ee Al-Kaalran
Channel waxay gaartay heerkii ugu dambeeyay ee Istanbul
Heerka ugu dambeeya ee Mashruuca Canal Istanbul
Waa maxay ugu dambaysa ee Mashruuca Channel Istanbul?
Waddada Channel Istanbul
DOF AGV waxay neef cusub u keeni doontaa waaxda saadka